लकडाउनमा के गर्दैछन् पोखरेली : RajdhaniDaily.com
Homeजीवनशैलीलकडाउनमा के गर्दैछन् पोखरेली
पोखरा । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट सम्भावित जोखिम कम गर्न सरकारले देशभर गरेको ‘लकडाउन’ को तेस्रो दिन पर्यटकीय नगरी पोखराका जनजीवन सुनसान बन्यो । केही अत्यावश्यक खाद्य, तरकारी, पानी, पेट्रोल, ग्यास, औषधी बिक्री गर्ने केही संख्यामा पसल खुले पनि अन्य भने अघिल्ला २ दिनझैं बन्द रहे ।
मानिसहरु घरमा ‘होम क्वारेन्टाइन’ मै बस्न बाध्य छन् । उनीहरु हत्तपत्त घरबाहिर निस्केको देखिँदैन । केही मात्र अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि बाहिर निस्केको पाइए पनि बजार पूरै सुनसान छ । सडकमा पानी बोकेका सवारीसाधन, खाना पकाउने एलपी ग्याँसका सिलिण्डर बोकेका सवारी साधनले घर–घर तथा डिलरहरुमा सप्लाई गरिरहेका छन् । सुरक्षाकर्मी र प्रेस लेखिएका नगण्य संख्यामा सवारीसाधनमात्र फाट्टफुट्ट गुडेको देखिन्छ ।
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर खाद्य पसलमा मानिसहरुको भीड कम गरिएको छ । पसलमा सामान किन्न आउने ग्राहकलाई सोसल डिस्टेन्स (सामाजिक दूरी) कायम गर्न लगाइएको पाइयो । पोखरा ७, रत्नचोकस्थित रेसुङ्गा स्टोर्समा खाद्य सामग्री किन्न गएका ग्राहकलाई अनिवार्य मास्क लगाउन र सोसल डिस्टेन्स कायम गर्न भनिएको थियो । सो नियमको पालना ग्राहकले पनि गरेको देखिन्थ्यो । सार्वजनिक सवारीसाधन नचलेको हुँदा सर्वसाधारण खरिद गरेको ग्याँस घरसम्म पु¥याउन साइकल प्रयोग गरेका थिए भने केहीले काँधमै बोक्न बाध्य थिए ।
घर बाहिर मास्क नलगाई निस्केको देखेमा प्रहरीले केरकार गरी किन बाहिर निस्केको ? के काम हो ? मास्क खै ? भन्दै केरकार गरेको समेत पाइने गरेको छ ।
मुख्य बजारभन्दा भित्रपट्टि निर्माणाधीन घर संरचनामा केही मजदूर अझै पनि काम गरिरहेको देख्न सकिन्थ्यो । दैनिक मजदूरी गरेर छाक टार्ने उनीहरुको लागि लकडाउन अभिषाप बनेको मजदूरको गुनासो छ ।
घरभित्रै रहेका पोखरेलीहरुले घरभित्रको कामकाज गर्ने, टीभी हेर्ने, पुस्तक तथा पुराना पत्रपत्रिका पढ्ने, सरसफाइ गर्ने, परिवारका सदस्यसँग बसेर नयाँ–नयाँ परिकार बनाउँदै खाने गरेको समेत बताएका छन् ।
पोखरा अन्नपूर्ण टोलकी जस्मिता कार्कीले यसबेला समय कटाउन निकै गाह्रो भएको बताइन् । पोखराको एक होटेलमा कार्यरत उनी लकडाउनको बेला न मूलघर गोरखा जान पाइन् न जागिरमा । जस्मिता भन्छिन्, ‘घर बाहिर जानु पनि भएन, कोरोना लाग्ने पो हो कि भित्रै कति बस्नु, पट्यार नै लाग्ने ।’
गत चैत ११ देखि लागू भै १८ चैतसम्म एक साताका लागि आह्वान गरिएको लकडाउनलाई जसोजसो पोखरेलीले काट्लान् । तर, लकडाउनको अवधि एक साताबाट लम्बियो भने यहाँको जनजीवन असहज हुने देखिन्छ । सोको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
कालोबजारी र अवैध कारोबार सीसी टिभीमार्फत नियमन गरिने
काठमाडौं । कालोबजारी र अवैध कारोबारले सर्वसाधारण जनता पीडित हुनुपर्ने र मुलुकको सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने ठहर गर्दै सरकारले कालोबजारी र अवैध कारोबारलाई सीसी...